Sunday August 20, 2017 - 13:16:05 in Wararka by Super Admin
Isagoo wareysi siinayay idaacadda islaamiga Andalus ee Afka xarakada Al Shabaab ku hadasha ayuu Sheekh Abuu Cabdalla Sheegay in si adag ay uga aargudanayaan dowladda Mareykanka xasuuqii ay dhowaan ka geysatay gobollada Jubbooyinka.
Waaliga Jubbooyinka ayaa si kulul uga hadlay xasuuqii 7 qof shacabka ah lagu laayay ee Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay tuulada Sheekh Axmed Yare oo u dhaxaysa degmooyinka Jilib iyo Kambsuuma.
Wuxuu sheegay in ciidanka Mareykanka ay si bareer ah u xasuuqeen dad abriyo ah oo aan waxba galabsan arrinkaas oo wajiga ka feydaya waxashnimada dowladda Mareykanka ee ku andacoota in ay difaacdo xuquuqul insaanka.
Al Shabaab waxay ku goodisay in jawaab celin adag ay ka bixin doonto wixii ka dhacay tuulada Sheekh Axmed Yare waxayna shacabka soomaaliyeed ugu baaqday in ay meel ugasoo wada jeestaan dowladaha ciidamadoodu ay kusoo duuleen dalka Soomaaliya.
Halkan ka degso Wareysiga Sheekh Abuu Cabdalla MP3